Shir looga hadlaayo qaxootiga dib ugu laabanaya Soomaaliya oo Muqdisho ka furmey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Shir looga hadlaayo qaxootiga dib ugu laabanaya Soomaaliya oo Muqdisho ka furmey
Shir looga hadlaayo qaxootiga dib ugu laabanaya Soomaaliya oo Muqdisho ka furmey
August 28, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmey shir looga hadlaayo qaxootiga Soomaaliyeed ee si iskood ah dalka ugu soo laabanaya iyo weliba kuwa kale ee dalka gudihiisa ku barakacay. Shirkan ayaa la doonaayaa in ay ka soo baxaan talooyin iyo xal.
Shirka waxaa furey raysalwasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed, waxaa soo qaban qaabisay Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka oo kaashaneyso Wasaaradda arrimaha gudaha, Federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, waxaa dhaqaalaha ku abxaaya shirka bixineysa hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Qaxooti badan oo muddo ku noolaa dalka Kenya ayaa si iskood ah dib ugu laabtey Soomaaliya sanadihii u danbeeyey, kuwaas oo qaar kamid ah mar kale dib ugu noqdeen xeryihii ay ka soo baxeen maamaada aysan jirin siyaasad iyo miisaaniyad dib loogu dejin karo dadkaas.
Shirku waxauu socon doonaa muddo saddex maalmood ah, waxaana diirada lagu saarayaa sida xal loogu heli karo qaxootiga soo laabanaya iyo barakacayaasha.
Maxaa looga hadlay shirkii uGu horeeyay ee ay yeesheen golaha xukuumada Puntland
February 21, 2019 By Mohamed Dahir
Somaliland oo u jawaabtay Xukuumada Fedraalka
February 21, 2019 By HORSEED STAFF
Dad badan oo ku dhintay DAB ka dhashay Dhaka, Bangaladhesh
February 21, 2019 By Horseed Team
Putin oo Maraykanka ugu hanjabay hub cusub oo uu sameystay
February 21, 2019 By Khalid Yusuf
UK: Xiisada Brexit iyo Xildhibaano isaga baxay Xisbi Xaakima May
February 21, 2019 By Hanad Askar